Weebụsaịtị chepụta Bellevue Washington
Kedu ka isenselogic.com si ewuli weebụsaịtị gị
Iwulite webusaiti maka ahia gi kwesiri ịmalite site na isi ihe okwu ndi mmadu ji acho oru gi. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị abụghị nke kachasị mma maka engines ọchụchọ ndị nwere ike ịnweta ndị ahịa ọhụrụ gị.
Kwụ na :kwụ 1: Discovery Market Business Analysis
Nyochaa nke gi website. Anyị na-ele meta tent / Keywords, anya ederede na koodu iji hụ otú ị na ebe nrụọrụ weebụ dị maka isi engines ọchụchọ. Dịka ọmụmaatụ, kedu ka ọdịnaya gị si dabara na isiokwu ndị ahịa na-achọ?
Nyochaa ndị asọmpi gị. Anyị na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ nke ndị asọmpi gị bụ ndị nọ n'ọkwá kacha elu 5 iji chọpụta usoro kachasị mma maka ntinye engine.
Bido isiokwu dị irè. Anyị na-emepụta ndepụta ahaziri iche nke isiokwu dị iche iche dabere na ihe ndị ahịa na-achọ. Kedu ihe ị ga-abanye n'ime igwe nyocha iji chọta azụmaahịa gị ma ọ bụ ibe weebụ? Mgbe ahụ, anyị ga-ewere isiokwu ahụ ma site na iji nhazi usoro isiokwu Google anyị nwere ike ịchọta zoro ezo Keywords o nwere ike ịbụ na i cheghị echiche. Anyị na-ejikwa nhazi nhazi iji chọpụta ọnụọgụ nke ndị na-azụ ahịa na-achọ mkpụrụ okwu ụfọdụ na-echekwa ndị ga-abawanye ụtụ ahịa.
Nzọụkwụ 2: Mmepụta isiokwu na nyocha
Nchọpụta isiokwu: Site na ndepụta nke isiokwu anyị, anyị na-amata ndepụta ndepụta nke isiokwu na ahịrịokwu. Nyochaa okwu sitere na ụlọ ọrụ na isi mmalite ndị ọzọ. Jiri ndepụta mbu nke Keywords ma chọpụta ọnụọgụ ajụjụ ọchụchọ engine. Anyị na-elekwasị anya isiokwu dị iche iche site na ọtụtụ, singulars na nkebi ahịrịokwu.
Ebumnuche na Ihe Mgbaru Ọsọ. Anyị na-akọwapụta ebumnuche gị n'ụzọ doro anya n'ọdịnihu ka anyị wee tụọ nloghachi gị na azụmaahịa site na mmemme mgbasa ozi ọ bụla ị malitere. Dịka ọmụmaatụ, ebumnuche gị nwere ike ịbụ inwe mmụba pasent 30 nke azụmahịa. Ma obu ichoro imeziwanye ngbanwe gi ugbua nke 2 pacenti ruo pesenti isii.
Ntụpụ ụkwụ 3: ọdịnaya njupụta na oke
Mepụta aha peeji. Isiokwu dabeere na isiokwu na-enyere guzosie ike gá »‹ na peeji isiokwu na eruba nke gá »‹ Keywords. Mepụta meta na mkpado. Nkọwapụta mkpado Meta na enyemaka na-emetụta pịa-site ma anaghị eji ya maka ọkwa. Tinye usoro nyocha usoro na ibe. Gwakọta Keywords ahọrọla na ebe nrụọrụ weebụ gị koodu koodu na ọdịnaya dị na ibe ahapụtara. Anyị na-ahụ na anyị tinyere ntuziaka ndị a tụrụ aro maka otu isi okwu atọ na ibe ọdịnaya ma tinyekwuo ibe iji mezue ndepụta ahụ. Anyị na-ahụ na ejiri mkpụrụokwu ndị metụtara ya mee ihe dị ka nsonye nke isiokwu gị. Ọ na - enyere ngwa nchọta aka ịmata ngwa ngwa ihe peeji ahụ bụ. Naturalzọ okike si arụ ọrụ kacha mma. Ọtụtụ ule na-egosi na peeji nke nwere mkpụrụ okwu 800 ruo 2000 nwere ike ịkarị nke mkpụmkpụ. Na njedebe, ndị ọrụ, ahịa, njikọ ọdịnaya ga-ekpebi ewu ewu na ọnụọgụ ogo.
Kwụpụ 4: Gbaa mbọ hụ na websaịtị gị na - arụ ọrụ nke ọma
Dabere na Google a na-emekwu nyocha na ngwaọrụ mkpanaka karịa na ngwaọrụ desktọọpụ. Na nzaghachi Google agbanweela algorithms ọchụchọ ya iji kwado saịtị ndị na-eji mmekọrịta enyi na enyi. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ugbu a abụghị mkpanaka mkpanaka ị na-efu ndị ahịa.
Nzọụkwụ 5: Nyocha na nyocha na-aga n'ihu
Nwalee ma tụọ: Nyochaa ogo engine search na ntanetị weebụ iji chọpụta arụmọrụ nke mmemme ị mejuputara, gụnyere nyocha nke arụmọrụ isiokwu ọ bụla. Nwalee nsonaazụ nke mgbanwe, ma debe mgbanwe na ederede Excel, ma ọ bụ ihe ọ bụla masịrị gị.
Mmezi. Mgbakwunye na mgbanwe nke isiokwu na ọdịnaya weebụsaịtị dị mkpa iji na-emeziwanye njin nchọta ya ka uto anaghị akwụsị ma ọ bụ jụ ileghara anya. Alsochọrọ inyocha ụzọ njikọ gị wee hụ na njikọ inbound na outbound gị metụtara azụmaahịa gị. Blog nwere ike inye gị usoro dị mkpa na ịdị mfe nke mgbakwunye ọdịnaya ịchọrọ. Gị ụlọ ọrụ nlekota nwere ike inyere gị aka na ntọala / ntinye nke blog.